‘तिम्रो मायामा’मा रेनुकाको आफ्नै कम्मर मर्काइ (भिडियोसहित) | Screennepal
‘तिम्रो मायामा’मा रेनुकाको आफ्नै कम्मर मर्काइ (भिडियोसहित)
Jun 18, 2017screennepalfeature, Music0
काठमाडौं, ४ असार । पेसाले उनी नर्स हुन् । त्यसैले उनको दिनचर्या विमारीसँग हुनु पर्दथ्यो । तर, उनी आफ्नो म्युजिक भिडियो प्रमोसशनमा व्यस्त हुँदै आएकी छन् । हो, उनी अर्थात गायिका रेनुका थापाले नर्सको जागीरे जीवनलाई केही समयका लागि ताँती राखेर गायनलाई आत्मसाथ गरेकी छन् ।
रेनुकाले हालैमात्र ‘तिम्रो मायामा’ बोलको आफ्नो गीतलाई भिडियोमा ल्याएकी छन् । जसको हिजोआज उनले प्रमोशन गर्दै आएकी छन् । भिडियो प्रमोशनमा व्यस्त रहेकी रेनुकाले भनिन्, ‘गायनलाई प्राथमकिता दिन केही समयका लागि जागीर समेत छाडेकी छु ।’ हुन त उनी गायनमा रहरलेमा त्र आएकी होइनन् । विभिन्न संगीत गुरुहरुसँग संगीतबारे ज्ञान लिएर पोख्त भएपछि उनी यस क्षेत्रमा आएकी हुन् ।
रेनुकाले ‘तिम्रो मायामा’ बोल गीतलाई डान्सिङ बिटमा ल्याएकी छन् । भिडियोमा मोडलिङ समेत आफै गरेकी छन् । सुन्दरताको कुरा गर्दा कुनै हिरोइन भन्दा नदेखिने रेनुकाले गायन कला त प्रस्तुत गरिन् नै उनको डान्स हेरेर समेत दर्शक मख्ख हुनेछन् । गम्भीर विष्टले निर्देशन गरेको भिडियोमा गायिका रेनुकासँग गौरवले अभिनयमा साथ दिएका छन् ।
‘तिम्रो मायामा’ गीतमा रेनुकाको स्वर र अभिनय मात्र नभएर शब्द पनि उनैले लेखेकी हुन् । स्वरमा भने उनलाई गायक सन्तोष लामाले साथ दिएका छन् । ‘तिम्रो मायामा’ भिडियोलाई पबन गौतमले खिचेका हुन् भने नवीन निरौलाले सम्पादन गरेका हुन् ।
Previous Postअभिनेत्री अन्जलीद्वारा आत्महत्या ! Next Postसुष्मालाई ‘राष्ट्र सेवा सम्मान’
एकजुट भए शेर्पा कलाकार !
‘लिटिल स्टार अफ दि इयर’ को खोजी सुरु
जेपी र सुनिताको स्वरमा ‘मुयेङ्सा एरेना…’ (स्टुडियो भिडियो)
Tweets by @screennepal241
आर्कषक बिनु, जो बेली डान्समा पोख्त छिन् (फोटोफिचर)
screennepalDec 18, 2017
काठमाडौं, ३ पुस । शेर्पा समुदायको कलाकारहरुलाई एकजुट गर्ने उद्देश्यसहिते शेर्पा कलाकार संघ गठन गरिएको छ ।...
कुसल र पार्वतीको ‘हल्का–हल्का’ रोमान्स ! (भिडियो)
प्रकृति–हेमराज अभिनीत ‘यति मनपराउँछु म…’ (भिडियो हेर्नुस्)
screennepalDec 16, 2017
screennepalAug 18, 2016
screennepalJan 25, 2016
screennepalJan 02, 2016
screennepalDec 22, 2015
स्क्रीन नेपाल मिडिया प्रालि
पुतलीसडक–३२ काठमाडौं ।
Phone: 9841338206, 9841495103
© 2014 screennepal. All Rights Reserved